Ururka Al-Islaax oo Khilaaf Cusub Hareeyay Garabyada Ururkaasi +Cod | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Ururka Al-Islaax oo Khilaaf Cusub Hareeyay Garabyada Ururkaasi +Cod
Sheekh Maxamed Axmed Nuur Garyare oo ahaa aas-aasihii urur weynaha Al-islaax ayaa ka hadlay xaalada ururkaasi, Maamul Cusub oo sanadkii hore la Magacaabay iyo Arrimo kale oo la Xiriira baaq uu u diray garabyada Ururkaasi.
Waxa uu Sheegay in bishii december ee Sanadkii 2015 hogaankii la sameeyay ee loogu talagalay in wax looga qabto habsami u socodka ururka uu gudan waaye howshiisa iyo hadafkii loo sameeyay isla markaana ku guul dareystay howshii loo igmaday.
Sidoo kale Sheekh Maxamed Axmed Nuur Garyare aas-aasihii ururka Al-islaax ayaa waxa uu ugu baaqay Ururweynaha Al-Islaax Shirweyne Wadatashi ah oo loo dhan yahay.
Waxa uu sheegay in Shir weynahaasi Wadatashiga ah uu ka noqonayo dhex dhexaad isla markaana uusan dhinac xigsan doonin.
Ururka Al Islaax oo ka mid ah Ururada ka shaqeeya dalka Soomaaliya ayaa sanadihii dambe waxa uu u kala qeybsamay garabyo kala duwan, waxaana jira dadaal dib loogu mideynayo Ururka Al Islaax oo uu wado Sheekh Maxamed Axmed Nuur Garyare.